Wararka Maanta: Arbaco, Mar 7 , 2018-Dawo iyo Agab caafimaad oo la guddoonsiiyay Isbitaalka Madiina
Arbaco, Maarso, 07, 2018 (HOL) - Hay’adda Camuud Foundation ayaa maanta dawo iyo agab caafimaad gaarsiisay Isbitalka Madiina iyo Jaamacadaha Muqdisho iyo Baanadir ee Magaalada Muqdisho.
Munaasabad lagu wareejinayay Dawo iyo Agab caafimaad ayaa lagu qabtay Xarunta Isbitaal Madiina waxaana ka soo qeybgalay mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka iyo Maamulka Isbitaalka.
Deeqdan dawada ah oo ay soo dhiibeen Muslimiin ku dhaqan Waqooyiga Ameeraca islamarkaana ay u soo Wakiisheen Hay’adda Camuud Foundation ayaa lagu wareejiyay Wasaarada Amniga iyo Maamulka Gobolka iyagoo dhinacooda ku sii wareejiyay maamulka Isbitaalka Madiina.
Mas'uul ka tirsan Hay'adda Camuud Foundation Cabdikariin Sheekh Mukhtaar oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in isbitaalka Madiina iyo Jaamadcadaha Muqdisho iyo Banaadir ay ugu deeqday Camuud Founadition Agabkan caafimaad waxuuna cadeeyay in agabkan uu yahay ilaa 2 konteenar oo isugu jiro Dawo iyo Qalab caafimaad kuwaasi oo ay wakiil uga yihiin Muslim Community ee Waqooyiga Ameerica.
Dr Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in ay ku faraxsanyihiin Agabkan maanta loogu deeqay Isbitalka Madiina iyo qeybaha waxbarashada ee Jaamacadaha Muqdisho iyo Banaadir waxuuna intaasi ku daray in tani ay muhiin u tahay bulshada Soomaaliyeed mid wax weyn loogu qaban doono.
Dr Yusuuf ayaa wuxuu sidoo kale Mas'uuliyiinta Dowlada ugu baaqay in ay ku dadaalaan sidii dalka oo dhan qalankan oo kale loo wada gaarsiin lahaa si buu yiri aan ula tartano dalalka hormaray.
Wasiir ku xigeenka Wasaarada Amniga Dr Cabdinaasir Saciid Muuse oo isna gababada munaasabadan ka hadlay ayaa waxuu sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in uu ka soo qeyb galo wareejinta agabyadan caafimaad ee loogu talo galay arrintii xanuunka badneyd ee umada soomaaliyeed ka soo gaartay dhacdadii 14kii octobar.
Wasiir ku-xigeenka ayaa dhinaca kale u mahad celiyay qeybihii sida weyn u soo shaqeeyay arrinkan waxuuna intaasi ku daray in ay dhiiro galinayaan dhamaan umadda Soomaaliyeed in ay dadaal weyn galiyaan arrimaha ceynkan oo kale ah si isku filaan ay u gaarto umada soomaaliyeed.
Ma’aha markii ugu horeysay oo Dawo iyo Agab caafimaad la gudoonsiiyo Isbitalka Madiina iyo sidoo kale Jamaacadaha Muqdisho iyo Banaadir walow tani ay ku soo aadeyso xilli aad ay u jirto baahiyo Agab caafimaad.